ရေးထားတာလေး အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းတယ်..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ ခွေနေတဲ့သူကို အရမ်း ကြောက်တတ်တယ်။ တော်သေးတာက သူ့ ပုံကို မတင်ထားဘဲ ပန်းချီလေးသာ တင်ထားလို့ ...။
မပန်တစ်ယောက် ဘာတွေများ စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်နေသလဲ လို့ မေးရအောင်ကလဲ... တောင်တောင် အီအီတွေ မတွေးကြနဲ့လို့ ဆိုထားလေတော့....
ဟုတ်. ရိုးရိုး လေးဘဲ ဖတ်သွားပါတယ်။
ဟာသ ပြော လို. ရ သလားဟင်.. အမြဲ ဘဲ ဟာသ မြင် နေလို့ပါ.။
ဟိုတုံး က ရွာ သားကြီး တယောက်က လှည်းမောင်းလာ တာ တံတားပေါ် ရောက်တော.ဟိုဘက် ကလှည်း နဲ.တွေ.ပါသတဲ.။ ရွာ သားကြီး က ဟေ့ ကောင်လမ်းဖယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ မဖယ်ရင် ငါ ဟိုလို လုပ်သလို လုပ်လိုက် ရ မလား လို. ကြီးမောင်းတော. ဟုိဘက် ကလူလည်း လန်.ပြီး လမ်းဖယ် ပေးလိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော.မှ ဦးကြီး ခင်ဗျား.ကျွန်တော် မဖယ် ရင် ဘယ် လိုလုပ် မှာ လည်းခင် ဗျား ဆိုတော. မင်း မဖယ်ရင် ငါ ဖယ် မှာ ပေါ့ ကွာ လို. ဆိုပါသတဲ.။
ဟား..ဟ.. တီကောင်.. တီကောင် ပေါ့.. ပန်ုဒိုယာရယ်..
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာနဲ့ စာသားတွေ..။
ရန်ဖြစ်မယ်ဆို ဒေါသကို ရှေ့ ကထား...အဲ...လျှော့..။
နဂါးလား မြွေပွေးလား မပန်။
ကြိုက်တယ်ဗျို့ ချစ်ပန်ရေ :)
တောင်တောင်အီအီ မတွေးနဲ့ ဆိုမှ တွေးဖြစ်အောင် တွေးသွားတယ်။ အဟီး
စကားလုံးတွေက ရှင်းရှင်းလေး နဲ့ လျှို့ ဝှက်လွန်းတယ်။
"သတိ အဆိပ်ပြင်းသည်" လို့ ပဲ
မပန်ရေ ဒီကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ်ဗျ။
Your posts always give readers food for thought. Thank you again for this one.
တခါတလေကျတော့လဲ အဲဒီလို အားမာန်လေး လိုတယ် ပန်ပန်ရေ။ လိုအပ်တဲ့နေရာမှသာ ကိုယ့်အဆိပ်ကို ထုတ်သုံးတတ်ပါစေနော်။
မျက်စိထဲ အဲဒီအကောင် တကောင်က ထ ကဗျာရွတ်နေသလို ထင်ရအောင် ပီပြင်လွန်းပါတယ်…
ဟားဟား.... အတော်ဘဲ...ဒီကလည်း သုပန္နက (စာလုံးပေါင်းမှန်မမှန်မသိ၊ ရမ်းသမ်းပေါင်းသည်) ဂဠုန်ရာဇာဘွဲ့ခံ တနင်္ဂနွေသားဘဲ။ နဂါးဆိုလျှင် အလွတ်မပေး။
ဟိုက်... လန့်လောက်အောင်ကို ကဗျာက ကောင်းတယ်ဗျ...
တော်ပြီဗျာ... ကိုယ့်တွင်းကိုပြန်အောင်းတော့မယ်... မြွေစိမ်းမြှီးခြောက် ကိုကြောက်လို့... အဟတ်ဟတ်... အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
မတွေးနဲ့ဆိုတော့မှတွေးမိတယ်။ ရန်ဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ရင် စိန်ခေါ်တာပဲဖြစ်ရမယ်... :D
ကဗျာက အသက်ဝင်ပြီးကောင်းပါတယ်... ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် နောက်ကို ရှောင်လိုက်မိတယ်..;)
အဆိပ်ဖြေစေအား ရှာဖွေလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းပို့စ် :D
မခင်ဦးမေ... ဟာသ မြင်နေတာ ပျော်စရာပေါ့။ မြင်နိုင်ပါတယ်နော်။
တေးမွန်... အေးပါ.. အကိုက်ခံရမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်မယ် သတိထား။
ကိုဆူး... ဒေါသကို ထိန်းပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါပဲ ဖြေရှင်းပါ့မယ်။ :)
မယ်မောင်... ရေမြွေဟုတ်ဘူးလေ သိပြီမဟုတ်လား။
ကောင်းကင်ကို.. ညည အိပ်မပျော် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
ကိုမောင်ရင်.. တကယ်က အဲဒီခေါင်းစဉ်ပေးမလို့။ ရုပ်ရှင်နာမည်နဲ့ တူနေမှာစိုးလို့။
နိုဝင်ဘာ မနုသွဲ့ မတန်ခူး ကိုဝင်းလတ် လွမ်းလုင် ပီတိ မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပါ
မမိုးချိုသင်း.. မှတ်ထားပါမယ် အမရေ..
ကိုပေါ.. အကြံကုန်ရင်တော့ ဆားချက်နေရမယ်နော။
ဇီးရိုးထရက်ရှ်.. ဖြေဆေးမရှိ.. တဲ့.။
ပုံမြင်ရတာနဲ့ တောင် ကြောက်ပါတယ်... ဆိုမှ
အမြီး လှုပ်ပြရုံမကတော့ဘူးဆိုတော့ ပိုကြောက်သွားတယ်..။ ကိုယ့်တွင်းကိုယ်ပြန်တော့မယ်နော်...။